Hiob 29 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Hiob kaee nna a odii dɛw ansa na n’amanehunu no reba no (1-25)
Ná obiara bu no wɔ kurow pon no ano (7-10)
Ná n’atɛntrenee te sɛ ataade (11-17)
Obiara tiee n’afotu (21-23)
29 Ɛnna Hiob toaa n’asɛm* no so sɛ: 2 “Minyae a anka abosome a atwam no asan aba,Nna a na Onyankopɔn hwɛ me so no. 3 Saa bere no, ɔmaa ne kanea hyerɛn me ti so,Na mede ne hann nantew sum mu.+ 4 Saa bere no, na migyina me nan so,Na na Onyankopɔn ayɔnkofa wɔ me ntamadan mu.+ 5 Saa bere no, na ade nyinaa so Tumfo no ka me ho,Na na me mma* nyinaa atwa me ho ahyia. 6 Saa bere no, na bɔta abu me so,Na na ngo hwie sɛ asubɔnten fi abotan mu ma me.+ 7 Saa bere no, na mekɔ kurow pon no ano,+Na na metena baguam.+ 8 Saa bere no, mmerante hu me a, na wogyina nkyɛn,*Na nkwakoraa mpo, na wɔsɔre gyina hɔ.+ 9 Abirɛmpɔn gyaee kasa;Wɔde wɔn nsa too wɔn ano. 10 Mmarima atitiriw kaa wɔn ano toom;Wɔn asɛm kaa wɔn anom.* 11 Obiara a ɔtee me ho asɛm no kaa me ho asɛm pa;Na obiara a ohuu me biara dii me ho adanse. 12 Efisɛ na migye ohiani a osu hwehwɛ ɔboafo,+Ne agyanka ne obiara a onni boafo.+ 13 Nea ɔreyɛ awu hyiraa me,+Na memaa okunafo koma dii ahurusi.+ 14 Mifuraa trenee sɛ ntama,Na na m’atɛntrenee te sɛ ataade* ne abotiri. 15 Mebɛyɛɛ ani maa anifuraefo,Na meyɛɛ nan maa apakye. 16 Meyɛɛ ahiafo agya;+Na wɔn a minnim wɔn mpo, mehwehwɛɛ wɔn asɛm mu maa wɔn.+ 17 Mibubuu ɔbɔnefo apantan,+Na migyee mmɔborɔwa fii n’anom.* 18 Ná meka sɛ, ‘Mewu wɔ me ara me fi,*+Na me nna bɛdɔɔso sɛ anwea. 19 Me ntini bɛtrɛtrɛw akɔ nsu mu,Na obosu begu me nkorabata so anadwo mu nyinaa. 20 M’anuonyam yɛ foforo daa,Na agyan a ɛwɔ me nsam no, mɛtow no ntoatoaso.’ 21 Ná nkurɔfo yɛ krado sɛ wobetie me,Na na wɔyɛ komm twɛn sɛ metu wɔn fo.+ 22 Mekasa wie a, ɛno ara ne no; obiara nka hwee bio.M’asɛm wurawuraa wɔn mu.* 23 Ná wɔtwɛn me sɛnea wɔtwɛn sɛ osu bɛtɔ no,Na wobuee wɔn anom sɛnea wɔtwɛn fefɛw bere mu osu* no.+ 24 Sɛ meserew kyerɛ wɔn a, na ɛyɛ wɔn nwonwa;Sɛ metew m’anim ma wɔn a, na wɔn koma tɔ wɔn yam.* 25 Mene ɔpanyin a memaa wɔn akwankyerɛ,Na na mete sɛ ɔhene a n’asraafo ka ne ho.+Meyɛɛ sɛ obi a ɔkyekye wɔn a wodi awerɛhow werɛ.+
^ Nt., “n’akasabebu.”
^ Anaa “m’asomfo.”
^ Nt., “wɔde wɔn ho sie.”
^ Anaa “Wɔn tɛkrɛma taree wɔn anom.”
^ Anaa “ataade nsasin.”
^ Anaa “ne se ntam.”
^ Nt., “wɔ me berebuw mu.”
^ Nt., “M’asɛm sosɔ guu wɔn asom.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Wɔamma m’anim hann anyɛ sum.”